मुख स्वस्थ्य – Health Post Nepal
कोरोना कहर : दाँत ब्रस गर्दा जान्नैपर्ने कुरा
बिरामी १ : डाक्टर’साब ब्रस कसरी गर्ने? मैले त मेसो नै पाउँदिन भन्या, सिकाइदिनुपर्यो लौन। बिरामी २ : डाक्टर’साब, म दिनको दुईपटक ब्रस गर्छु तैपनि मेरो दाँत जहिले फोहोर नै हुन्छ। आफ्नो सफा दाँत नदेखेको पनि वर्षौं भइसक्यो जस्तो...
मुख स्वास्थ्यप्रति बजेटमा किन बेवास्ता?
ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस : दक्षिण एसियाली मानिसमा देखापर्ने विशेषप्रकारको मुख समस्या
दाँत किराले खानु वा कुहिनु : एक साधारण तर जटिल समस्या
संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस दन्तरोगले ग्रस्त भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दन्तरोगले अरु रोगको तुलनामा बढी नै मानिसलाई सताउने गर्छ । मुख स्वास्थ्य शरीरको पूर्ण स्वास्थ्यका लागि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मुखका अनेकौँ रोगमध्ये दाँतमा लाग्ने किरा एक...
बच्चाको दाँत उम्रिँदाका समस्या : समाधान र सावधानी
सबै आमाबुबा आफ्ना बच्चाको पहिलो दाँतको पर्खाइमा हुन्छन् । बच्चाको पहिलो दाँत जन्मिएको ५ देखि ६ महिनामा उम्रिन्छ । बच्चाको दाँत उम्रिने समयमा मुख तथा शरीरमा केही परिवर्तन देखापर्छन् । यो बच्चा र अभिभावक दुवैका लागि पिडादायी समय हो...
९० प्रतिशत नेपालीको समस्या दन्तसडन, के हो ?
बढ्दो पाश्चात्य जीवनशैली, हतारमा र नचपाईकन छिटो खाना खाने प्रवृत्ति, फास्टफुड र जंकफुडको प्रचलनले दाँतमा किरा लाग्ने रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ । भारतमा सन् २०११ मा गरिएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत बालबालिका र ९० प्रतिशत वयष्कमा दाँतसम्बन्धी कुनै...